खेल हो भन्दै १४ वर्षीया बालिकासँग ४९ वर्षीय पुरुषले बनाए लगातार स’म्बन्ध, बच्चा बसेपछि फरार ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/खेल हो भन्दै १४ वर्षीया बालिकासँग ४९ वर्षीय पुरुषले बनाए लगातार स’म्बन्ध, बच्चा बसेपछि फरार !
घटना पछि बालिकालाई उनले कसैलाई भनेमा परिवारका सदस्यहरूसहित सबैलाई ख’त्त’म पार्ने जोड दिने गरेका थिए । यसकारण बालिकाले कसैलाई केही भन्न सकिनन् । आफुमाथि भएको उक्त ह’र्कत लगातार सहँदै गइन् । तर हालै बालिकाको अवस्था बिग्रँदै गयो । जब उनलाई अस्पताल पुर्याइयो तब बालिकाको पेटमा बच्चा भएको कुरा खुल्न आयो ।
यो सब भएपछि परिवारले सोध्दा, ती बालिकाले सम्पूर्ण घटनाको बारेमा बताइन् । बालिका अस्पताल र प्रहरीकोमा पुगिन् भनेपछि त्यो पुरुष भागेको थियो । तर उसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । यस मुद्दामा प्रहरीले पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ ।